13 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာစက်ရုံ - တရုတ် 13 လက်မလျှပ်စစ်စကူတာထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အဲဒါက မှန်ဖို့ကောင်းလွန်းရင် ဒီ MotoTec Chaos Folding ကို ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။လျှပ်စစ်စကူတာ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါက အတိအကျ ပေးတာ။2021 New Buy China Eletr Elektro 3000W E Sccoter Eletrica De Trotinette Electrique 80 Km/H Elektro Roller Electric Scooter အား Elwctric ခေါက်နိုင်သော 500 Watt စျေးသက်သာသော 36V ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီပါရှိသော၊ 2021 Maxmov စက်ရုံစျေးနှုန်း 800W 72V EEC/Coc အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်သောစကူတာ၊ 2021 Maxmov လမ်းပေါ်ရှိ Maxmov ဘီးနှစ်ဘီးကွင်းဆက်ဒရိုက် 500W EEC/Cocult အတွက်ခရီးသည်အများအပြားသည် စကူတာစီးစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ တယ်လီဖုန်းများကို အိတ်ကပ်များတွင်သာ သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့် လုံခြုံရန်နေရာရှိခြင်းသည် ၎င်းတို့၏လျှပ်စစ်စကူတာဖြင့် မောင်းနှင်စဉ် သိုလှောင်ရန်နေရာ လိုအပ်မည့်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် သင်သည် စျေးနှုန်းအကွာအဝေးတွင် ဝယ်ယူပါက ပေါင် 1,000 / $1,000 အောက်ရှိ အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်စက်ဘီးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်တန်ဖိုးနှင့် ကွဲပြားသည်ကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။လျှပ်စစ်စက်ဘီးအကယ်၍ သင့်တွင် အနည်းငယ်ပို၍ သုံးစွဲရပါက $2,000/£2,000 အောက်။2021 Trek ၏ Domane LT ပလပ်ဖောင်းအတွက် Trek ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိလမ်းစက်ဘီးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်အရာအားလုံးနီးပါးကို ယူဆောင်ကာ သင့်အား တက်နိုင်စေရန်အတွက် နောက်ထပ် omph အနည်းငယ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။HP သည် Trek ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော Domane SLR ခံနိုင်ရည်-လမ်းပလပ်ဖောင်းကို ယူဆောင်သွားပါသည်။Bianchi e-Impulso သည် Ebikemotion drive system ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိသည်။3. အထူးကျွမ်းကျင်သူ e-bike degreaser ကို အသုံးမပြုပါက၊ ယခုအချိန်သည် drive လေ့ကျင့်ခန်းကို ရေဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆေးကြောရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။5. သင့်စက်ဘီးဘောင်ကို ရေသန့်အနည်းငယ်နဲ့ ကောင်းကောင်းဆေးကြောပေးပါ။ဘက်ထရီ၊ မော်တာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုများတွင် ရေကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ယူကေတွင်၊ eBikes သည် မော်တာအား 25kph ဖြတ်တောက်ပေးကာ 250 watts ထက်မကြီးသော အကူအညီပေးသည့် စက်ဘီးနင်းပြီး စက်ဘီးမလှုပ်မချင်း eBikes ကို အသုံးမပြုသည့် စက်ဘီးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ဩစတေးလျနိုင်ငံသားများသည် ရိုးရှင်းမှုကိုနှစ်သက်သောကြောင့် eBikes များကို လည်ချောင်းလည်ပတ်မှုအဖြစ် ခွဲထုတ်ပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။တွန်းအားလည်ပတ်သည့် eBikes များသည် 200-watts နှင့် 25kph တွင် ကန့်သတ်ထားသင့်ပြီး pedal assist သည် 250-watts ကဲ့သို့ အကူအညီပေးနိုင်သော်လည်း တူညီသောအလျင်ကန့်သတ်ချက်တွင် ကန့်သတ်ထားသည်။
Dual motor လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w patinete electrico
လူပျိုအင်အား7500Wအချက်အချာကျသော မော်တာများသည် တိကျသောအခြေအနေများအောက်တွင် 125-145KM/H တွင်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစကူတာအား တွန်းပို့သည်၊ စီးနင်းသည့်အခါတွင် လျှောစောက်ခြင်းနှင့် အခြားအတားအဆီးများကို အလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်ပြီး၊ များစွာသောစကူတာများ၏ Single motor ထက် များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
တရုတ် bicicleta electrica 72V မှ 15000w လျှပ်စစ်စကူတာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တိကျသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်ကို ပြသရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် အခြားသူများက ဤနေရာတွင် သင်တွေ့မြင်ရသည့်အရာကို ပေးဆောင်ကြပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မစစ်ဆေးရသေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းချက်ကို ကြည့်ပါ။
စိမ်းလန်းစိုပြေသွားပါလား။haibadz လျှပ်စစ်စကူတာ.စကားပြောဘီးများပေါ်ရှိ ၎င်း၏ 13" pneumatic tube တာယာများသည် စီးနင်းသူအား ပြိုင်ဘက်ကင်းသော သက်တောင့်သက်သာနှင့် ငြင်းမရနိုင်သော သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို ခံစားစေပါသည်။ဤ 72V လျှပ်စစ်စကူတာသည် ဓာတ်ဆီမလိုအပ်သောကြောင့် စက်ဘီးများ၏ eco-friendly ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ကုန်းပတ်ကြီးတစ်ခုလည်း ရှိသည်။ဖရိန်တွင် အမှုန့်သွန်းထားသော အလွှာပါရှိပြီး သင်ပထမရထားသလောက် အသစ်အတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသည်။ထို့အပြင် တင်ပါးဆုံရိုးများသည် အလွန်ချိုမြိန်သည်။အနောက်ဒစ်ဘရိတ်များသည် အစွမ်းထက်သော ရပ်တန့်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေပြီး Scooter ကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။နောက်ဘီးယက်သည် ပါဝါအောက်ရှိချိန်တွင် ဆွဲငင်အားပိုမိုရရှိစေသည့်အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့် မောင်းနှင်နိုင်မှုတို့အတွက် အဖုအထစ်များကို ချောမွေ့စေသည်။ဤ Razor EcoSmart Metro Electric Scooter တွင် သင်စိတ်ကြိုက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်အတွက် သင်အလိုရှိသော အမြင့်သို့ ချိန်ညှိနိုင်သော စံအစားထိုးနိုင်သော စက်ဘီးထိုင်ခုံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ဤလျှပ်စစ်စကူတာသည် အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း တစ်နာရီ ၈၅ မိုင်နှုန်းရှိပြီး ၈ နာရီအထိ အားသွင်းနိုင်သည်။ပိုရှည်သော ခရီးများနှင့် အမြန်ခရီးတိုများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
အသစ်ဆုံးစတိုင်လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w အစွမ်းထက်စကူတာလျှပ်စစ်
K13 လျှပ်စစ်စကူတာ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်-
မော်ဒယ် k13 15000W၊ ခေါက်နိုင်သောလျှပ်စစ်စကူတာ
13-inch offroad tyre၊ 15000w၊ 72v 70Ah ဘက်ထရီ၊ အချက်ပြ
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း 145km/h ~ 150km/h အစစ်အမှန်စမ်းသပ်မှု၊ 140km/h အစစ်အမှန်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်
အကွာအဝေး 130-140KM သည် ဘက်ထရီနှင့် မော်တာပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အားသွင်းချိန် ၉ နာရီ
ဘက်ထရီ 5000 ~ 5500 ကြိမ်
မော်တာ Brushless မော်တာ
ပစ္စည်း အလူမီနီယမ်နှင့် သံသတ္တုစပ်
အများဆုံး 250KG အလေးချိန်
တာယာ pneumatic တာယာ၊ လမ်းပိတ်၊ မြို့တွင်းလမ်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တာယာအရွယ်အစား ၁၃ လက်မ
စျေးပေါသော bicicleta electrica လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
[ကြာရှည်သောဘက်ထရီသက်တမ်း] 72V၊ 70ah၊ 15000W dual motor ဘက်ထရီပမာဏ၊ 165km အကွာအဝေးမောင်းနှင်မှုအတွက် အားကောင်းသောပါဝါကို ပေးစွမ်းသည် (ရလဒ်များသည် အလေးချိန်၊ အရှိန်နှင့် လမ်းအမျိုးအစားအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်၊ The haibadz အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာ မတူညီသော မောင်းနှင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အမြန်နှုန်းရွေးချယ်ခွင့်သုံးခု ပေးထားသည်။ဒေသန္တရ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ မတူညီသော မောင်းနှင်မှုအမြန်နှုန်းများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း 145 km/h သည် လမ်းကြမ်းမောင်းနှင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ဤမြန်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်စကူတာသည် အလေးချိန် 220 ကီလိုဂရမ်အောက်ရှိသော လူကြီးများကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။အေးမြသောအသွင်အပြင်၊ ၃၅ ဒီဂရီစောင်း၊ မြို့တွင်းလမ်းနှင့် off-road များအတွက်သင့်လျော်သည်။အလင်းရောင်နှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော LCD] LCD သည် အမြန်နှုန်း၊ ခရီးမိုင်၊ အချိန်၊ ဘက်ထရီပါဝါ၊ အမြန်နှုန်းမုဒ် စသည်တို့ကို ပြသပေးပါသည်။ ကြီးမားသော LED ရှေ့မီးကြီးနှစ်လုံးသည် ညဘက်တွင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်စေရန်အတွက် လမ်းပေါ်တွင် လင်းနေပါသည်။[ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း- ရှေ့နှင့်နောက် အမြန်တုံ့ပြန်မှုသည် စီးနင်းမှုပိုမိုလုံခြုံစေသည့် disc brake အမျိုးအစားဖြစ်သည်။13 လက်မ မြင့်မားသော ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော ပျားလပို့တာယာသည် သင်၏မောင်းနှင်မှုကို ပိုမိုလုံခြုံစေပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
စတိုင်အသစ်အဆီတာယာစကူတာ electricos လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
HAIBADZ ကွဲပြားသော အဆင့်ဆက်တင်3ခုဖြင့် အနောက်ပြောင်းနိုင်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့် ရှေ့ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသော ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။၎င်းသည် မတူညီသော စီးနင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် မှန်ကန်သော ပျော့ပြောင်းမှုပမာဏကို ပေးစွမ်းပြီး စီးနင်းသူ၏ အလေးချိန်ကို အကောင်းဆုံး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ချိန်ညှိနိုင်သော Suspension လက်မောင်းထောင့် (နောက်)
Suspension ၏အမြင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
အဆင့် ၁ (နိမ့်) မြို့ပြလမ်းများ
အဆင့်2(MID) မူရင်း
အဆင့်3(HIGH) လမ်းပိတ်အခြေအနေ
15000W BLDC မော်တာဖြင့် ပြီးပြည့်စုံပြီး အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော အမြင့်ဆုံးထွက်ရှိနိုင်သော HAIBADZ ထူးခြားသောမောင်းနှင်စနစ်။အလွန်ပေါ့ပါးသည်။မူလနှစ်ဘီးယက်လျှပ်စစ်ကစ်ဘုတ်၏ပါဝါကိုခံစားပါ။
အစားထိုးနိုင်သော ရော်ဘာကတ် အမျိုးအစား ၅ မျိုး
သင်နှစ်သက်သော လျှပ်စစ်စကူတာဆိုင်းထိန်း၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို ချိန်ညှိရန် ဆိုင်းထိန်းရော်ဘာကျည်တောင့်များကို အလွယ်တကူ အစားထိုးနိုင်သည်။ရော်ဘာကျည်တောင့်များကို မတူညီသော elasticity အဆင့်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။(ရှေ့နှင့်နောက် suspension နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ရနိုင်သည်)
84v ခေါက်လျှပ်စစ်စက်ဘီး 15000w လျှပ်စစ်စကူတာရောင်းရန်ရှိသည်။
ဆိုင်ကယ်နှစ်ထပ်အဆင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆိုင်းထိန်းစနစ်
တည်ငြိမ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အများစုမှာ ထိုသို့သော စကားဖြစ်သည်။အီး-စကူတာများစျေးကွက်ရုန်းကန်မှုတွင်၊ Yume သည် shock absorption suspension ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အာရုံစိုက်ရန်ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။k13 သည် dual-spring နောက်ကျောဘက်ရှိ ရှော့ခ်-စုပ်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့် တွဲဖက်ထားသော dual မော်တော်ဆိုင်ကယ်တန်း-ရှော့တိုက်-စုပ်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို အသုံးပြုထားကာ k13 ၏ ရှော့ခ်စုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာမြှင့်တင်ပေးပြီး k13 သည် အခြားအရာများနှင့် မတူဘဲ ထူးခြားဆန်းသစ်သော သက်တောင့်သက်သာရှိသော အဆင့်ကိုပေးစွမ်းသည်။ စျေးကွက်တွင် E-scooters ။အတွေ့အကြုံက ကြမ်းတမ်းတဲ့မြို့လမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သဲတွေ၊ ဗွက်ခင်းတွေနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ထောပတ်လို ချောမွေ့ပါတယ်။
ရောင်းအားအကောင်းဆုံး 15000w ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ 84V
monopattino အီလက်ထရစ်ကော်အင်္ဂါရပ်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
monopattino elettrico e-scooter သည် စီးနင်းသူ၏ ပါဝါနှင့် တည်ငြိမ်မှုအတွက် လိုအပ်မှုအပေါ် အဓိကထား၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ထို့အပြင် ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များ ပေါင်းစပ်ထားသည်-
အစွမ်းထက် Max 15000W မော်တာများ
monopattino elettrico e-scooter သည် နှစ်သက်ရာအခြေအနေများတွင် 85 mph (140 kmh) အထိ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို ရရှိစေရန် ပံ့ပိုးပေးသည့် အတန်းထဲတွင် အကောင်းဆုံး Max 15000W BLDC Dual Hub မော်တာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။သို့သော်လည်း ထုတ်လုပ်သူများ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း စံပြအမြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက်မှာ 85 kmph ဖြစ်သည်။
Samsung SDI Lithium-ion ဘက်ထရီ?
monopattino elettrico တွင် 100% မူရင်းနှင့် ပြည်တွင်းလုပ် Samsung SDI 72V 70Ah H35E Li-ion ဘက်ထရီ 4950 W မြင့်မားသော စွမ်းရည်ပါရှိသည်။ကြီးမားသောဘက်ထရီကြောင့် စက်သည် အားသွင်းတစ်ကြိမ်လျှင် 85 မိုင် (135 ကီလိုမီတာ) အထိ အထွတ်အထိပ်အကွာအဝေးကို အလွယ်တကူ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် dual charge system ပါ၀င်ပြီး စက်ပစ္စည်းကို အရှိန်နှစ်ဆဖြင့် အားသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
American bicicleta electrica2wheels လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
ကလေးတွေက ငါတို့ကို ချစ်တယ်လို့ပဲ ထင်တာ။ယာဉ်များ?ကောင်းပြီ၊ မင်းမှားတယ်။
လျှပ်စစ်ဘောကန်စကူတာ (eScooter) သည် ၂၁ ရာစု လျှပ်စစ်မော်တာများနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ကစ်စကူတာဖြစ်သည်။လျှပ်စစ် ရွေ့လျားမှုသည် အနာဂတ်၏ လှိုင်းတံပိုးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလာပါသည်။monopattino elettrico သည် ဤထွန်းသစ်စနည်းပညာ၏ ရှေ့ဆုံးတွင် ရပ်တည်နေပါသည်။eScooter များသည် အလုပ်လုပ်နေသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် မြန်နှုန်းမြင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
eScooter များသည် စက်ဘီးလမ်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြို့ပြယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို မခံရပါ။၎င်းတို့သည် ညစ်ညမ်းမှုကို မဖြစ်စေပါ။လှေကားထစ်များ သို့မဟုတ် အခြားအတားအဆီးများတွင် eScooter သည် ခေါက်သိမ်းနိုင်ပြီး အတားအဆီးကို အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ထို့နောက် ၎င်းကိုချ၍ ပြန်စီးပါ။eScooter ၏စျေးနှုန်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် မော်တော်ယာဥ်၏ နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ထက် သက်သာပါသည်။ကားပါကင်လည်း စိတ်မပူနဲ့။မင်းရဲ့ရုံးခန်းအထိ ယူသွားပါ။eScooter များတွင် အလွန်တိုတောင်းသော သင်ယူမှုမျဉ်း ရှိပြီး လူအများစုသည် ၎င်းကိုမြင်ပြီးနောက် တစ်မိနစ်ခန့် စီးနင်းနိုင်သည်။
monopattino elettrico သည် မြောက်အမေရိကရှိ လူကြီးများအတွက် eScooter စျေးဝယ်ရန် ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။
72v-96V vespa လျှပ်စစ်စကူတာ လျှပ်စစ်စကူတာ 15000w
တိုတောင်းသောအကွာအဝေးကိုသွားရမည်ဆိုလျှင်၊ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက် ပိုကောင်းသည်ဟူ၍မရှိ။လျှပ်စစ်စကူတာ.သူတို့က စျေးမကြီးဘူး၊ အဆင်ပြေပြီး စီးရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကယ်တင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ကားများအသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့အစိုးရများသည် ပိုမိုသိရှိလာသဖြင့်၊ လမ်းမများပေါ်တွင် ဤ e-scooters အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် ယခုအခါ ပိုမိုရိုးရှင်းလာပါသည်။
e-scooters တွေအကြောင်း ငါအနှစ်သက်ဆုံးဆိုတာ မင်းသိတယ် - စက်ဘီးတွေထက် (မြန်တယ်၊ ပိုထိရောက်တယ်) ဒါပေမယ့် စက်ဘီး/ဆိုင်ကယ်အများစုထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတာ မင်းသိလား။
ဤသည်မှာ e-scooter ဝယ်သည့်အခါ သင်ရရှိမည့် အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် လက်တွေ့ကျသည် – e-scooter စီးနင်းခြင်းသည် လွယ်ကူပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အသုံးပြုသည့်တိုင် ထူးဆန်းပုံမပေါ်ပါ။
84V 15000w/10000w လျှပ်စစ်စကူတာ၊ လူကြီးများအတွက် စကူတာလျှပ်စစ်
E-Scooter ဆိုတာ ဘာလဲ
An လျှပ်စစ်စကူတာသို့မဟုတ် e-scooter သည် လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်လည်ပတ်သော ယေဘူယျမတ်တပ်ရပ်စကူတာဖြစ်သည်။အီး-စကူတာများသည် သေးငယ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် လောင်စာဆီရှာမတွေ့သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖော်ရွေသည်။ဤစကူတာများတွင် သာမန် မော်တော်ယာဥ်မဟုတ်သော စကူတာများထက် ပိုကြီးသော ကုန်းပတ်ကြီးတစ်ခု ရှိသည်။စီးနင်းနေစဉ် အလှည့်ကျပြုလုပ်ရန် လက်ကိုင်တစ်ခုပါရှိသည်။
ဤစကူတာအမျိုးအစားများသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။၎င်းတို့သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 15 ကီလိုမီတာမှ 30 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိပြီး မော်ဒယ်၏ဘက်ထရီသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အကွာအဝေး5ကီလိုမီတာမှ 50 ကီလိုမီတာအထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။အသုံးမပြုသည့်အခါတွင်လည်း ခေါက်နိုင်သည်။e-scooters များသည် လမ်းလျှောက်နှုန်းထက်6ဆ ပိုမြန်သည်။